खादा खादैको भात छोडेर क्वारेण्टाईनमा ल्याएका दुई युवाको कोरोना रिर्पोट नेगेटिभ — SuchanaKendra.Com
खादा खादैको भात छोडेर क्वारेण्टाईनमा ल्याएका दुई युवाको कोरोना रिर्पोट नेगेटिभ
पर्वत । केहि दिन अगाडी ब्यापारको सिलसिलामा पर्वतको धाइरिङ गएका दुई युवालाई घरबाट भात खाईरहेको अबस्थामा उठाएर पर्वतको एउटा क्वारेण्टाईनमा ल्याईयो । कारण थियो पर्वतको धाइरिङमा जादा कोरोना संक्रमितको शंका भएका युवालाई भेटेको भन्ने ? यहि कारण उनीहरुलाई कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरियो र भर्ना गरिएका ति दुई युवाको रिर्पोट पनि नेगेटिभ आएको छ ।
कोरोनाको सम्भावना भएको भन्दै पर्वतको जलजला गाउँपालिका धाइरिङका एक र नाङलीवाङका अर्का एक युवाको स्बाव परिक्षणको लागि काठमाण्डौं पठाइएको थियो । परिक्षणमा दुवैको रिर्पोट नेगेटिभ आएको अस्पतालका प्रमुख डा. शिशिर देवकोटाले जानकारी दिए । उनीहरु मध्ये धाइरिङका युवा बागलुङमा संक्रमण पुष्टि भएकी युवतीसंग काठमाण्डौं देखि पोखरासम्म जहाजमा आएका थिए ।
अर्का युवाले भने आफूलाई पनि सक्रमण भएको हुनसक्ने भन्दै ल्याव परिक्षणका लागि अस्पतालमा आएका थिए । योसंगै पर्वतबाट पठाईएका ४ जनाका ल्याव रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ ।
कोरोनाको आशंकामा क्वारेण्टाईनमा राएिका एक युवाले भने आफुलाई अमानविय रुपमा अस्पतालमा ल्याइएको बताएका छन् । उनका अनुसार आफुलाई अन्य रिसिईबिको आधारमा कोरोना अस्पतालमा राखिएको र केहि अनलाईनहरुले समाचार पनि गलत तरिकाले शंक्रमण नै देखियो जस्ता शब्दहरु राखी लेखेकोमा आपत्ती जनाएका छन् । उनका अनुसार प्रहरी लगाएर केहि सल्लाह गर्नुछ भनी सिधै ल्याएर कोरोना अस्पतालमा राखेको बताएका छन् । उनका अनुसार जनप्रतिनिधीहरुले पनि आफुलाई राम्रो ब्यवहार नगरेको भनाई छ ।